मूल्य निर्धारण नीति। मार्जिन व्यापार के हो?
आफ्नो उत्पादन लागि मूल्यहरू कसरी सेट रिटेलर? मार्जिन र के हो मार्जिन? यी प्रश्नहरू उपभोक्ता र व्यापार शुरुआती चासो को हो, र।
स्पष्ट बुझे यो मार्जिन कि व्यापार गर्न, एक खुद्रा पसल खोल्न जाँदै छ जो कोहीले गर्न बाध्य छ। त्यहाँ एक स्पष्ट जडान तिनीहरूलाई बीच हुनत मार्जिन र मार्जिन को अवधारणा, फरक हुन्छन्। मार्जिन प्रत्येक सामान डलर को खरीद मा निवेश ल्याउँछ धेरै लाभ कसरी संकेत गर्छ। एक मार्जिन सूत्र छ - अतिरिक्त शुल्क / (100 + अतिरिक्त शुल्क), बिक्री हरेक डलर कसरी लाभ देखाउँछ। त्यसैले के कुख्यात बाहेक "पैसा आवश्यक", माल मा एक वा अन्य मार्जिन स्थापना गरेर निर्देशित हुनु हो?
प्रतियोगिता र मूल्य निर्धारण रणनीति
बजार मा प्रतिस्पर्धा धेरै उच्च छ भने, यो, आफैमा, प्रयोगकर्ता सबै भन्दा कम मूल्यहरु संग स्टोर, सामान लागि लगभग एउटै मूल्यहरु सेट प्रतियोगिहरु को नियमित अनुगमन गरेर यति चयन गरिएको छ।
ती बजार, जहाँ छवि मामिलामा, स्थिति वा सेवा, एकदम माल को मूल्य भिन्न हुन सक्छन्। यो, उदाहरणका लागि, स्टोर ब्रांडेड कपडे, रेस्टुरेन्ट, घर उपकरण र इलेक्ट्रनिक्स र पसलहरूमा यति मा। सफल चलाखीपूर्ण, त्यसैले रिटेलर प्रतियोगिता बाट बाहिर जाँच गर्न कुनै पनि तरिकामा खोजिरहेका छन्, अतिरिक्त सेवा र सामान प्रदान गर्न, सेवा मामलामा विकसित जारी छ प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु द्वारा प्रतिलिपि, किन उसले धेरै तिर्न गर्नुपर्छ र स्टोरबाट ग्राहक बनाउँछ वा अतिथि यस रेस्टुरेन्टमा विशेष छ खरीदार गर्न "व्याख्या" सधैं छन्। र यो बिल्कुल पर्याप्त छैन अस्पष्ट नारा "हामी प्रिमियम खण्ड मा काम गर्दै छन्।" छ
लागत मूल्य निर्धारण विधि
एक विकल्प को मूल्य निर्धारण नीति कम्पनी - उत्पादन लागत आधारित मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यो दृष्टिकोण लागि मूल्य सबै लागत कवर र लाभ मार्जिन समावेश गर्नुपर्छ। यदि त्यहाँ उत्पादन को दैनिक माग एक वस्तु छैन र लक्ष्य अतिरिक्त माल चाँडै र हानि बिना छुटकारा प्राप्त गर्न भने खरीदार मूल्य मा वृद्धि नोटिस छैन भने, बजार को यो खण्ड मा कुनै पूर्ण प्रतिस्पर्धा छ यो दृष्टिकोण स्वीकार्य छ। धेरै राम्रो तरिकाले यो व्यापार मा यस्तो मार्जिन जो को बिक्री र सम्बद्ध उद्यम लागत छ जो उत्पादन लागत, छ बुझे गर्नुपर्छ मूल्य को गणना लागि यो दृष्टिकोण संग बजार मा उत्पादनहरु पदोन्नति।
ग्राहक मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण
यो दृष्टिकोण मा, मार्केटिङ मामलामा मूल्य को व्याख्या प्रयोग गरेर। यो उत्पादन यसलाई किन्न तयार छ कति लागि, धेरै लायक छ। यो संग बजार यो रणनीति लागू inelastic माग। यो आभूषण मा खुद्रा व्यापार, कला, डिजाइनर कपडे, सामान र अन्य स्थिति मा मार्जिन सेट गर्छ। वा यो गरिब को लागि उत्पादन हुन सक्छ। यो खण्ड मा, मांग तपाईं एक पसलमा उत्पादन वा सेवाको गुणस्तर सुधार पनि यदि pensioner, अधिक भुक्तानी गर्नेछ रूपमा पनि inelastic छ। लक्षित दर्शक को उचित परिभाषा संग, यसको आवश्यकता र यो रणनीति को मनोभावहरू धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। खरीदार यदि विक्रेता ग्राहक प्रभावित गर्न आवश्यक levers फेला छ व्यापार मा यस्तो मार्जिन र के, यो हुनुपर्छ भनेर सोच्न छैन।
मूल्य निर्धारण नीति कमी
पसलमा मुल्य पनि अक्सर परिवर्तन गर्नुभयो भने, खरीदार foul प्ले suspects र फर्कन सक्छ। बोनस को प्रणाली, छूट अन्यथा यो भ्रममा र धोका गर्ने प्रयास जस्तै हुनेछ, ग्राहकहरु र स्टोर कर्मियों गर्न बिल्कुल स्पष्ट हुनुपर्छ।
दुरुपयोग छूट हुनु हुँदैन। अन्ततः, यो तथ्यलाई गर्न माल को खरिदका लागि भनेर पर्याप्त छैन पैसा सक्छ। यो त्रुटि अक्सर newcomers एकदम के मार्जिन व्यापार बुझ्दैनन् बनाउन। यसलाई (लागि दिन्छिन् भने, राम्रो तरिकाले) बल्लतल्ल एक पर्याप्त सभ्य कारोबार नै लागि तिर्ने सम्भव छ।
कुनै पनि सामान वा लेखापाल मूल्यहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक खरीदार र पोर्ट्रेट को स्थिति - पहिलो दोस्रो लागत बारे केहि थाहा छैन।
यो एक संकेत दोष मार्केटिङ र छ - किन यति महंगा बारेमा पनि बारम्बार ग्राहक प्रश्नहरू श्रेणी प्रबन्धकहरू। मूल्य "शुभकामना लागि" उजागर छैन, यो जायज हुनुपर्छ। किन यो आवारागर्दी ~ विशेष र यो कुना भन्दा अधिक महंगा छ किन विक्रेता खरीदार गर्न व्यक्त गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो अध्ययन छैन भने, त्यसपछि मूल्य कम गर्न हुनेछ। Upscale बजार - एक प्रतिभाशाली manipulator सचेत उपभोक्ताहरु।
मूल्य निर्धारण गर्न सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण
माल को लागत मा समावेश गरिएको छ के को एक स्पष्ट समझ, के मूल्य सकेसम्म, र के खरीदार भुक्तानी गर्न इच्छुक छ रूपमा कम हुन सक्छ संग मूल्य निर्धारण गर्न सही दृष्टिकोण सम्भव छ (सबै, तर लक्षित दर्शक को एक ठोस प्रतिनिधि)। यो लगातार प्रतिस्पर्धी वातावरण विश्लेषण बाहिर हुनुपर्छ, यस्तै माल को खुद्रा व्यापार मा मार्जिन परिभाषित।
श्रम बजार को सहभागीहरू र आफ्नो कार्य
युमेन क्षेत्र जनसंख्या: वर्णन, संख्या, पेशा र जातीय संरचना
अनिवार्य र सुखविलासमा
वित्तीय प्रणाली र एक संक्षिप्त विवरण को लिंक
लगानी विश्लेषण - सही व्यापार निर्णय को एक विधि
TT होटल Pegasos Resort5* (टर्की / Alanya): विवरण, फोटो र समीक्षा
म हावा बन्दूक अनुमति आवश्यक र कसरी एक हतियार चयन गर्न गर्छन्
Volgin इगोर Leonidovich: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, साहित्यिक काम
संसारको भविष्य: ठूलो अगमवक्ताहरू
"Akvalor बच्चा" - छिटो र प्रभावकारी सहयोग
वर्ग एक मध्यम लम्बाई कपाल कट्टर हो। फैशनेबल बाल कपाल (बाल कपाल): अनुहार र समीक्षाको आकार अनुसार प्रकार, विवरण, चयन
भान्सा लागि पर्दे - यो भित्री एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण
पेन्तिकोसको - यो के हो? पेन्तिकोसको: हामी के मना छन्?
रूसी संघमा अस्थायी निवासको लागि अनुमति: नमूना, कागजातहरू, फोटोहरू
मार्गदर्शन झुकन मिसिन आफ्नो हातमा आकारको ट्यूब
Kossovo मा Kosava महल - बेलारुस को आकर्षण
राष्ट्रिय जापानी पोशाक